Mahdi Yatakabaruu : “TPLF qoraalkeedii ahaa reer aan Hawiye ahayn Dalkaan Ma xukumi karaa waan Beeninay” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Mahdi Yatakabaruu : “TPLF qoraalkeedii ahaa reer aan Hawiye ahayn Dalkaan Ma...
Mahdi Yatakabaruu : “TPLF qoraalkeedii ahaa reer aan Hawiye ahayn Dalkaan Ma xukumi karaa waan Beeninay”
R/W K/Xigeenka Dalka oo ah u qeybsanaha Somaliya ee Dr Abiy Axmed ayaa khudbad uu u jeedinayey Caruur ku yiri “ Waa in doorashada 20/21 lagu kala baxaa wareegga Kowaad oo Farmajo ku soo baxaa ” Waxaanu tiraac u soo qaatay Doorashoyinkii boobka ahaa ee G/Mudug, K/Galbeed oo 15 qof lagu dilay iyo tii u dambeysay ee H/Shabeelle oo xataa lacag lagu siiyey kii la yiri la tartan MW Guudlaawe oo xataa is illoobay sacabna la soo booday markii la yiri waxaa guuleystay Cali Guudlaawe.
Mahdi Guuleed oo aan tagi Karin halka loo nisbeeyo inuu u dhasahy Somaliland ee uu qabiil ahaan ka soo jeedo ayaa Xamar waxaa uu ka wadaa gooddi iyo inuu yiraahdo dadka Xamar u dhashay waxaa la beeneeyey hadalkii ay TPLF, iyadoo hadalkaas uusan dhihin qof Hawiye waayo haddii ay sidaas u hadli lahaayeen waa u dhaqmi lahaayeen. Maanta doodda sidaan waa ka duwanaan lahayd oo Mahdi Yatakabaruu kuma digteen.
Doorashadii 2017 ee Madaxweynenimada waxay Muduloodka heleen 165 iyadoo ay codeysay 238, taas oo u dhiganta 70%, hasa yeeshee nolosha ay ku soo koreen iyo dimoqraadiyadda oo u keentay inay qabiilka ka fogaayeen ayaa waxay ku waayeen kursiga uu hadda ku fadhiya Farmajo oo ay Maxamed Siyaadkii talada ay ka tureen uu adeer iyo barbaariye uu ahaa.
Marka Yatakabaruu ha ogaado lama beeneyn ee waa la rumeeyey. Haddii taariikhda dib loo fiiriyo waxaa dalkaa burburiyey gef laga galay qabiilka uu sida dedban u ijaafaayey Mahdi Guleed oo ah wakiilka ugu sarreeya Jawaasiista Itoobiyaanka.
Haddaba dadka uu ijaafeeyey ee uu ugu gooddiyey inay wareegga kowaad uu Farmajo uga qaadan doono waxaa ku filan oo kaliya inay ugu dambeynta codadkooda si xirfadeysan u isticmaalaan oo ay sameeyaan dowlad aanu Amxaar jaajuus ah ku aflagaadeyn Karin oo taleeda ay gacanta ku hayaan uguna caddaalada falaan dadka la dulmiyey ee qabiil kasta leh.
Masuuliyadda Saaran dhamaan dadk Somaliyeed waa in dalka laga baadiyaa Farmajo sidii looga badbaadiyey Maxamed Siyaad, laakiin laga qabtaa inta uusan wax badan duminin.
Ugu dambeynt waa in la hubiyaa inay codadkooda dhigtaan meel saxan oo inaan lagu dhibaateyney shacbiga Somaliyeed, inaan cadow shisheeye loo dhiibeyn qof Somali ah, inaan Khasab cunug abti looyahay iyo mid iibsan looga dhigeyn MW dowlad Goboleedyada, inaan maranaba is afgaranwaagooda xoog lagu xallineyn, inaan dekadahooda loo saxeexeyn codowgooda soo jireenka ah iyo inaan Kalitaliyayaal iyo Qatar lagala tashaneyn arrimahooda oo Fahad, Farmajo iyo Yatakabaruu aan dalka lagusii deyn.
MOL markii ay dabagashay sababta uu Mahdi Guuleed, waa wiilka Bar ka Somaliga ah barka kalana ka Amxaar ah oo uu hadalladaas daandaansiga ah u tuurtuurayo waxay ogaatay in Abiy Axmed uu Farmajo u sheegay inuu ka shaqeyn doono inuu soo noqdo, laakiin markaas uu RW u magacaabi doono Mahdi Yatakabaruu, Mahdina uu ka shaqeyn doono in arrinta Somaliland “la dhameeyo”.
Halkaan haadii ay sidaas u suuragasho waxbaa ku qarsan. “La dhameeyo” ma waxaa loola jeedaa sidii Allah ha u naxariistee Cumar Carte Qaalib oo tirtiray Ciidankii Xoogga Dalka Somaliyeed oo ku amray inay isu dhiibaan Jabahadii Maxamed Siyaas la dagaalay ee Riday, Mahdina uu yiraaahdo waan aqoonsannay ina dalka lakala goosto oo Somaliland inta ay sheeganeyso loo aqoonsado. Mar I dge Allah Dago Mar labaad I dage anigaa is dagay ee Mucaaridka la ijaafayayow codadkiinna isu geeya oo dalka isku haya, una cadaalad fala dadka Somaliyeed oo dhibban.
Previous articleSharif Xasan, Guleed & Kheyre oo rafasho ugu jira sidii Xasan Kheyre uga qeyb geli lahaa shirka berri
Next article(Deg Deg) Xasan Cali Kheyre oo Caawa ku wareegaya Guryaha Madaxda Mucaaradka.